प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कडा चुनौती, प्रचण्ड अर्बपतिबाट रोडपति कसरी ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कडा चुनौती, प्रचण्ड अर्बपतिबाट रोडपति कसरी ?
शनिबार चितवनमा पुुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना सम्पत्ति विवरण बारेका प्रश्नहरुको खण्डन गर्न नसकेपछि उल्टै विषयान्तर गर्दै भने ‘सिंगै नेपाल आफ्नो हो ।’ सिंगै देशको मालिक वा हकदार आफू नै भएको उनको दलील आफू राजनेता वा भनौं नयाँ राजा भएको अर्थ दिने खालको थियो । उनले शहरमा बन्ने सबै अग्ला भवन र टावर जती प्रचण्डकै हुन भन्ने गलत प्रचार गरिएको पनि दावी गरे । आदिवासी जनजाती महासंघको महाधिवेशन उदघाटन समारोहका प्रमुख अतिथि प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सम्पत्ति विवरणमा आफूमाथि उठेका सारा प्रश्नहरुको गोल–मोटोल जवाफ मात्रै दिने प्रयास गर्दै आएका छन । उनले जनयुद्धकालदेखि नै आफ्नो सबै सम्पत्ति पार्टीलाई बुुझाएको भनेर पनि स्पष्टिकरण दिएका छन ।
देश बदल्न १० वर्षे जनयुद्ध लडेको दावी गर्ने प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरुको पछिल्लो सम्पत्ति विवरण स्खलित नैतिक चरित्रकोे कलाबिहिन नौटंकी शिवाय केही होईन भन्ने त उनीहरुले लुकाएको शेरचन आयोगको गायव प्रतिवेदनले पनि सिद्ध गर्छ ।
सरकारको पछिल्लो सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणले गरीव प्रचण्ड र झनै गरीब माओवादी मन्त्रीहरु रहेको देखाएको छ । तर सरकारका मन्त्रीहरुले आखाँमा छारो हाल्न मात्रै सम्पत्ति विवरण पेश गरेको तथ्य त्यहाँ व्यक्त गलत र अपत्यारिलो विवरणले नै देखाउँछ । देश बदल्न १० वर्षे जनयुद्ध लडेको दावी गर्ने प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरुको पछिल्लो सम्पत्ति विवरण स्खलित नैतिक चरित्रकोे कलाबिहिन नौटंकी शिवाय केही होईन भन्ने त उनीहरुले लुकाएको शेरचन आयोगको गायव प्रतिवेदनले पनि सिद्ध गर्छ ।
काँग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार गठन भएको हो, गत साउन १९ गते । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ खाएको त्यसकै भोलिपल्ट । सामान्यतः सरकार गठन भएको ६० दिनभित्र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुुपर्ने हो । तर सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक गरेको छ मंसिर २९ गते, पुरा चार महिना बितेपछि । र, अर्को रोचक कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादीका अन्य मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण हेर्दा उनीहरुलाई जनताले विचरा भन्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका गरिब प्रधानमन्त्री मध्येमा आफूलाई उभ्याउदै प्रचण्डले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर जनतालाई छक्क पारेका छन ।
शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि आज पर्यन्त प्रचण्ड नियमित सांसद छन । दुुई पटक त प्रधानमन्त्री भए । उनको नीजि निवास लाजिम्पाटको मासिक पानी खर्च नै ११ लाख रहेका विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन । छोरा तथा स्वकीय सचिव प्रकाश दाहाल निकै सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्टमा बस्छन । चितवनतिरै छोरा प्रकाशले पशुफार्म संचालन गरेको भनेर प्रचण्ड आफैले निरीक्षण भ्रमण गरेका प्रसंगहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए ।
उनको उपल्लो स्तरको जीवन दैनिकी र रवाफपूर्ण जीवन शैली नै हुन उनको विवरणलाई खारेज गर्ने मुख्य प्रमाण ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा श्रीमती सीता दाहालको नाममा चितवनमा एक कट्ठा जमीन र तीन तोला सुन रहेको उल्लेख छ । यो पनि स्वआर्जन नभएर पैतृक स्रोतको सम्पत्ति भनिएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि आज पर्यन्त प्रचण्ड नियमित सांसद छन । दुुई पटक त प्रधानमन्त्री भए । उनको नीजि निवास लाजिम्पाटको मासिक पानी खर्च नै ११ लाख रहेका विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन । छोरा तथा स्वकीय सचिव प्रकाश दाहाल निकै सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्टमा बस्छन । चितवनतिरै छोरा प्रकाशले पशुफार्म संचालन गरेको भनेर प्रचण्ड आफैले निरीक्षण भ्रमण गरेका प्रसंगहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए ।
जो मानिस नियमित सत्ता राजनीतिमा छन, जसका परिवारको व्यवसाय छ र जसको नियमित भत्ता सुविधा सरकारले व्यहोरोको छ, अनि उनै मान्छे यति धेरै सर्वहारा गरीब कसरी बन्न सक्छन ? प्रचण्डप्रति जनताको अविश्वास र प्रश्न उनको ढाँट्ने बानी र शैलीकै कारण मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गत बुधबार नै प्रधानमन्त्रीका साथै मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुुर महरा पनि निकै गरीब मन्त्रीमा रहेको विवरणले बताउछ । जब की महराको केही बर्ष अघि चर्चित टेप प्रकरणले उनले चीनियाँ सहयोग गैरकानुुनी बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको खुलासा गरेको थियो । उनले हेल्लो नेपाललाई लाईसेन्स दिदादेखि पटक पटक मन्त्री हुदाँ निकै आर्थिक अपचलन गरेको भनेरै अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई निशानीमा पार्दै आएको छ । उनको सम्पत्ति र सत्ताशक्तिमाथि विरोधीले मात्रै किन उनकै पार्टीका सहयात्रीहरुले पनि बारम्वार प्रश्न उठाउदै आएकै छन । तर उल्टै महरा आफू गरीब र तन्नम भएको प्रमाण दिन्छन । यहीनेर देशका अर्थमन्त्री महराले झुुट बोलेको तथ्य उदघाटित भएको छ ।
नयाँ जोगिले धेरै खरानी धस्छ भने झैं बढी क्रान्तिकारी र सर्वहारा देखिनका लागि आफ्नो दैनिक जीविकाको ठाँटबाँठ भन्दा पनि निम्नस्तरको सम्पत्ति विवरण देखाएर माओवादी मन्त्रीहरुले जनतालाई राम्रै व्यंग्य गरेका छन । दैनिक जसो सुट फेरेर लगाउँछन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । घडी, टाई, टोपी, जुत्ता वा अन्य लत्ताकपडाको मूल्य र खर्च कति होला ?
नीति गत रुपमा पनि यो सम्पत्ति सार्वजनिक शैली त्रुुटीपूूर्ण रहयो । एक त चार महिनापछि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, त्यो पनि अविश्वसनीय विवरण । वास्तवमा अरु भन्दा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको दलका अन्य मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सोह्रै आना झुुटपूर्ण देखिन्छ । नयाँ जोगिले धेरै खरानी धस्छ भने झैं बढी क्रान्तिकारी र सर्वहारा देखिनका लागि आफ्नो दैनिक जीविकाको ठाँटबाँठ भन्दा पनि निम्नस्तरको सम्पत्ति विवरण देखाएर माओवादी मन्त्रीहरुले जनतालाई राम्रै व्यंग्य गरेका छन । दैनिक जसो सुट फेरेर लगाउँछन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । घडी, टाई, टोपी, जुत्ता वा अन्य लत्ताकपडाको मूल्य र खर्च कति होला ? बदलीरहने सुविधासम्पन्न गाडी र अन्य खर्चको के हिसाब ? घरमा छोरा प्रकाश, बुहारी बिना, एक नाती र जीवनसंगिनी सीता दाहाल छन । प्रचण्ड अर्थात माओवादीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दैनिक पारिवारिक खर्च नै कुनै एक व्यापारिक घरानाका उद्योगपति वा नयाँ राजा भन्दा कम छैन ।
प्रचण्डको हैसियत नयाँ राजाको भन्दा कमजोर पनि देखिदैन । उनको घरमा कमाउने पेशामा कोही लागेका छैन्न । साउन यता सत्तारोहण गरेको अवधि बाहेक प्रचण्डको घरमा सुको कमाउने छैन्न । प्रचण्डको आम्दानी छ साँसदको रुपमा, पूर्व प्रधानमन्त्री र हाल त प्रधानमन्त्रीकै रुपमा । त्यो पनि आम्दानी नदेखाउने र त्यसको पनि खर्च विवरण पेश नगर्ने प्रचण्ड शैली नै उनका सारा झुटको पर्दाफास गर्ने प्रचण्ड प्रपन्च हो ।
प्रचण्ड वा उनका कुनै पनि नेताको दैनिकी नेपालकै धनाढ्य शासकको जस्तो छ । प्रचण्डले कुनै कुरा किन ढाँट्न जरुरी छ र ? उनले वैध आम्दानी वैध रुपमा किन पेश गरे हुन्न र ? काग बाठो भयो भने फोहर खान्छ भने झैं नक्कली सर्वहारा क्रान्तिकारी हुने नाममा प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरु स्खलित भएका छन, नङंगिएका छन ।
जनयुुद्ध पनि झुट र असफल । शान्ति यात्रामा पनि केवल झुट खेती । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादीले शान्ति कालमा सुुरु गर्ने भनेर पोखरामा उद्घोष गरिएको उत्पादन व्रिगेड पनि कर्कलाको पानी झैं एकादेशको कथा भैसक्यो । पार्टी घाटामा रहेको विवरण निर्वाचन आयोगमा देखाएका छन । तर पनि प्रचण्ड वा उनका कुनै पनि नेताको दैनिकी नेपालकै धनाढ्य शासकको जस्तो छ । प्रचण्डले कुनै कुरा किन ढाँट्न जरुरी छ र ? उनले वैध आम्दानी वैध रुपमा किन पेश गरे हुन्न र ? काग बाठो भयो भने फोहर खान्छ भने झैं नक्कली सर्वहारा क्रान्तिकारी हुने नाममा प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरु स्खलित भएका छन, नङंगिएका छन । यो उनीहरुले पार्टी, जनता र देशकै लागि गरेको नियतवशको वेईमानी हो, जो अक्षम्य रहनेछ ।
यदि प्रचण्डको सम्पत्ति उनले सार्वजनिक गरेको विवरण जस्तै हुदो हो भने त उनी संघीयता विरोधी जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी भन्दा पनि सामान्य दैनिकीमा चल्नुु पर्ने हो । पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता लालवावु पण्डित जस्तै अति सरल र सामान्य दैनिकी पनि छैन, दीगो आम्दानीको स्रोत पनि छैन । तर करोडौंको प्रचण्ड निवासको बिल कसरी भुत्तानी हुन्छ त ? साँसदको तलब र पूर्वप्रधानमन्त्रीको भत्ता सुविधा वा बहाल हुदाको मात्रै आम्दानीले प्रचण्डको यो रवाफ र शान सम्भव भएको होइन भन्ने दिनको घाम जत्तिकै छर्लंङग छ । खासमा प्रचण्डले ढाँटेकै हुन । ढाँटेकै छन । उनले भाँती पुुरयाएर ढाँटेका हुन ।
उनले आफूलाई सर्वहारा नेता प्रमाणित गर्न खोजेका हुन भने भृकुटीमण्डपको पार्टी भेलामा कसम खाए अनुसार किन सामान्य घरमा डेरा सरेनन् ? किन जीवनशैलीको राजशी हैसियत कायम राखे त ?
उनी सर्वहारा वर्गको नेता प्रमाणित हुन जोगी शैलीको देखिए पनि उनको दैनिक जीविकोपार्जनको शैलीले नै उनको सम्पत्ति विवरणको धज्जी उडाएको छ । उनले आफूलाई सर्वहारा नेता प्रमाणित गर्न खोजेका हुन भने भृकुटीमण्डपको पार्टी भेलामा कसम खाए अनुसार किन सामान्य घरमा डेरा सरेनन् ? किन जीवनशैलीको राजशी हैसियत कायम राखे त ? यो प्रश्न गैर माओवादीभन्दा पनि माओवादीभित्रै चर्को रुपमा उठनुुले पनि उनको ढाँटलाई प्रमाणित गरेको छ ।
पार्टी फुटेपछि प्रचण्डलाई उसै क्यास माओवादी भनिएको पनि होईन । मोहन वैद्य किरणले पार्टी फुटाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई क्यास माओवादी भनिएकै हो । सम्पत्ति जे जस्तो छ, त्यो देखाउन नसके पनि अस्वभाविक रुपमा लुकाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरुको यो शैली गज्जवको राजनीतिक हास्य श्रृङखला हो ।
कलाबिहिन नाटक हो प्रचण्ड वा उनका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणको यो पछिल्लो हास्य प्रस्तुुती, जो जनताले न पत्याएका छन, न पत्याउने खालकै छ ।
प्रधानमन्त्री र माओवादीका मन्त्रीहरुको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण झुट त हो नै आकाशतिर फर्केर थुक्ने भुलको पुनरावृत्ति पनि हो । सम्पत्ति अर्काको नाममा राख्ने र सौजन्यको नाममा नयाँ राजा हुने प्रवृत्ति माओवादी नेताहरुको नयाँ आम्दानी खेती हो । त्यही शैलीको कलाबिहिन नाटक हो प्रचण्ड वा उनका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणको यो पछिल्लो हास्य प्रस्तुुती, जो जनताले न पत्याएका छन, न पत्याउने खालकै छ ।
माओवादी सुप्रिमो र सर्वहारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै कमिटीको प्रतिवेदन लुकाएर जो गल्ती गरेका थिए, त्यसैको निरन्तरता हो पछिल्लो झुट विवरण पनि । हिम्मत छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरचन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर माओवादीको नयाँ धनवाद नीतिको नै खुलासा गरेर गल्ती स्वीकार गर्ने आँट देखाउन सक्नुुपर्छ । के त्यो साहस छ प्रचण्डसंग ?
माओवादीहरु शान्ति राजनीतिमा फर्केदेखि नै अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जनमा लागे र निकै विवाद भयो । त्यसैले पुराना पाका नेता अमिक शेरचन र स्व. पोष्ट बहादुुर बोगटीहरुको कमिटीले तयार पारेर बुुझाएको माओवादी नेताहरुको सम्पत्ति विवरण अहिले गायव छ । प्रचण्डले नै सो प्रतिवेदन किन गायव पारे ? त्यसको सक्कल बमोजिम नक्कल जनतालाई देखाईदिने प्रचण्ड आँट खोई ? माओवादी सुप्रिमो र सर्वहारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै कमिटीको प्रतिवेदन लुकाएर जो गल्ती गरेका थिए, त्यसैको निरन्तरता हो पछिल्लो झुट विवरण पनि । हिम्मत छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरचन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर माओवादीको नयाँ धनवाद नीतिको नै खुलासा गरेर गल्ती स्वीकार गर्ने आँट देखाउन सक्नुुपर्छ । के त्यो साहस छ प्रचण्डसंग ?
बास्तवमा सर्वाग नाङगो मान्छेले अरुलाई लाज नभएको भन्ने आरोप लगाए जस्तै माओवादीले नाटकीय गरीबी देखाएर जनतालाई व्यंग्य, ठट्टा र जग हसाईको नयाँ सम्पत्ति नाटक देखाएको छ । यो झुटको पुुलिन्दा माओवादीको स्खलित नैतिक चरित्र उदांग पार्ने अर्को लज्जाष्पद सम्पत्ति काण्ड शिवाय केही हैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा उनका मन्त्रीहरुको कथित गरीबीलाई जनताले धिक्कार त भन्ने नै छन, शायद आउदा चुनावहरुमा सबक पनि सिकाउने छन । किन की सत्य छोप्न सकिन्छ, मार्न सकिन्न, मेट्न सकिन्न नै ।
प्रचण्ड वा उनका मन्त्री गरीब भएको तथ्याँक पस्कदै आएको माओवादी मन्त्रीहरुको अविश्वसनीय सम्पत्ति विवरण नै उनीहरु माथिको सम्पत्ति छानविन सुुरु गर्ने आधार बिन्दुु बनाईनुपर्छ । सम्पत्ति कमाउने र लुकाउने अनि सर्वहारा भएको नाट्क गर्ने शैली प्रकारान्तरले अर्को संगठित भ्रष्टाचार हो । राजनीतिका आडमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारको जरो काट्ने ताकत राज्यसंग, कम्तिमा अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसंग हुुनुुपर्छ । तर के अख्तियारले माओवादी मन्त्रीहरुको, नेताहरुको सम्पत्ति छानविनको हैसियत राख्छ त ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।